Wararkii ugu dambeeyay Doorashada Madaxweynaha | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Doorashada Madaxweynaha
Wararkii ugu dambeeyay Doorashada Madaxweynaha
Axadda berrito ah ayaa lagu wadaa in Magaalada Muqdisho lagu doorto Madaxweynaha Dowladda Federaalka, ee xilka hayn doono afarta sano ee soo socota.
39 musharax ayaa isu diiwaangeliyay tartanka Doorashada Madaxweynaha, inkastoo musharaxiinta qaarkood ay barraha bulshada ku sheegeen in ay doorashadaasi ka tanaasuleen, balse tirada tanaasushay ay xaqiijin doonaan Guddiga Doorashada Madaxweynaha.
Magaalada ayaa laga dareemay mashquulka iyo ololaha ay musharaxiinta ku soo kala jeedinayaan Xildhibaanada Labada Aqal, si ay codka u siiyaan maalinta doorashada.
Hoteelada iyo guryaha ay degan yihiin musharaxiinta ayaa waxaa ku badan dhaqdhaqaaqa Xildhibaanada iyo siyaasiyiinta labada dhinac ku xeeran, kuwaa oo isu soo kala jiidaya Mudaneyaasha Baarlamaanka iyo musharaxiinta codka doonaysa.
Illaa iyo hadda ma jirto musharax si rasmi ah loogu saadaalin karo inuu ku guuleysan doono xilka, walow uu musharax kasta juhdi badan ku bixinayo, sidii uu xilkaasi ku qaban lahaa.
Doorashada ayaa ka dhaceysa Teendhada Afisyooni oo dacalka ku haysa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, halkaasoo amnigeeda si weyn loo adkeeyay. Waxaa kaloo hakad la geliyay howlihii ka socday Garoonka Aadan Cadde oo berrito aan shaqayn doonin.
Sidoo kale magaalada ayaa lagu soo rogay bandow socon doono 9:pm fiidnimo ee caawa illaa 6:00am subaxnimo ee maalinta Isniinta.
Doorashadan ayaa noqonayso tii 3aad oo xiriir ah oo dalka lagu qabto, tan iyo intii doorashooyinka Somaliya loo soo wareejiyay in lagu qabto gudaha dalka, muddo toban sano laga jooggo.
Previous articleDaahir Maxamuud Geelle oo ka tanaasulay tartanka Doorashada Madaxweynaha
Next articleGuddiga Doorashada oo soo saaray shuruudaha laga doonayo Xildhibaanada iyo musharaxiinta